Apple Watch Series 6 inoyera mwero weoxygen muropa | Ndinobva mac
Apple Watch Series 6 inoyera okisijeni muropa
Ndanga ndakamirira kwemakore kuti Apple iite oxygen yeropa paApple Watch. Ndakafunga kuti dai ndanga ndisati ndadaro, ndezve zvikonzero zviri pamutemo nevakuru vehutano, vachitenda kuti iko zvino kurova kwehana kweApple Watch kunogona kuverengawo oxygen level.
Chero pulsometer chigunwe chatakawana muAmazon kwemakumi maviri emaEuro anoshandisa tekinoroji yeLED "kuona" kurova kwemoyo zvakare kunokwanisa kuongorora mwero weoksijeni muropa. Kune zvekare kune akawanda anodhura smartwatches uye zviitiko zvechiuno mabhande ane ichi chinhu. Ini handikwanise kunyatsonzwisisa kuti sei tichafanira kumirira akateedzana 20 kuti tiite pane Apple Watch.
DigiTimes yakaburitsa nhasi kuti inotevera Nhepfenyuro dzeApple 6 kukwanisa kuyera muyero weokisijeni muropa. Chirevo ichi chinotsanangura kuti Apple yakasaina odha kumutengesi ASE Technology, kugadzirira mitsara yekugadzira yeApple Watch Series 6.
Chirevo chinotsanangura kuti wachi yacho inosanganisira a Switch oxygen muropa kekutanga. Vhiki rapfuura takatsanangura izvo zviongorori zvechimiro zvaive zvawanikwa muWatchOS 7 beta kodhi.
Kubva pane iyo kodhi, zvaive zvisina kujeka kana chimiro chichigona kuvhurirwa mamodheru aripo. Izvo zvave zvichifungidzirwa kwemakore kuti optical moyo rate sensors zvakare inokwanisa kuyera huwandu hweoxygen muropa, asi Apple anga asina. activated.
Apple Watch Series 6 ichave iine oximeter sensor
Sekuzivisa kwakaita Apple WatchOS 7 mwedzi wapfuura paWWDC 2020 pasina kutaura nezve ichi chitsva chinhu, zvaiita kunge chaive chakamirira kuve nesenenzi yacho. ChiDigitimes chirevo chinotsigira izvo, zvichiratidza kuti inotevera wachi ichaisa sensor kunyanya kuona oxygen mazinga muropa.
Vazhinji vanhu vakuru vane hutano vane huwandu hweropa oxygen mukuru kupfuura 95%. Ropa okisijeni mazinga pazasi peimwe chikumbaridzo ari kutungamira zviratidzo zvekupemha matambudziko, uye anogona kukanganisa moyo nehuropi basa.
Kufanana neye aripo akaderera emoyo rate notices paApple Watch kana iyo EKG mashandiro, wachi inogona kuzivisa mushandisi kana ona iyo isina kujairika yeropa okisijeni uye unokurudzira kuti ushanyire chiremba
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Apple Watch Series 6 inoyera okisijeni muropa
Canada inoshandisa iyo Covid-19 App kubva kuApple neGoogle
Vanenge vangangoita mamirioni makumi maviri nemaviri ekushanya kune ino atypical WWDC